भिडन्त | साहित्य संगालो २०१३
Tag Archives: भिडन्त
कथा – रातो कोट
Posted on November 26, 2013 by भण्डारी2013
आज पनि जुलुस हाम्रै घरको बाटो भएर गयो। सोच्थेँ, राजनीति भनेको हात्तीको पाइला हो। अरू सबै पाइलालाई हात्तीको पाइलाले छोपिदिन्छ। कति ठूलो पाइला चालेकी थिएँ मैले। माओ-लेनिनको फोटोअगाडि उभिएर मुट्ठी उचाल्दै गाएकी छु, ‘यो अन्तिम युद्ध हो आ-आफ् नै ठाउँमा डटौँ, अब मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ। गनी साध्य छैन, कतिपटक यो गीतलाई दोर्‍याएकी छु मैले। भनिसाध्य छैन, कतिपटक आफ्नै रगतलाई भीरपहरामा चढाएकी छु मैले। पीडालाई रगत र आँसुसँगै बगाएकी छु मैले। मैले देखेका मेरा सपनाहरू विपना नभएझैँ युद्ध पनि कहिल्यै अन्तिम भएन। तर, अग्रजहरूले दिएको निर्देशन भने हाम्रा लागि अन्तिम हुन्थ्यो। कुनै प्रश्न-उत्तर गर्ने साहस हुँदैनथ्यो, हामीमा। उनीहरूले अह्राएको काम गर्नु मात्र हाम्रो धर्म थियो। यसबाहेक हाम्रो अर्को धर्म थिएन। यति धेरै देशभक्तिको भावना जगाइदिन्थे हामीलाई, हाम्रा लागि आफ्नो जीवन देश र जनताको मुक्तिमा समर्पित गर्न गाह्रो थिएन। संसार कहाँ बुझेका थियौँ, कहाँ देखेका थियौँ र हामीले? देखेका थियौँ त मात्र आफ्ना अग्रज नेताहरूलाई, सुनेका थियौँ त उनीहरूले गरेको भाषणलाई, गरेका थियौँ त उनीहरूले सुम्पिएको कामलाई बस् ! एक्युरयिमभित्र दौडिरहेका माछाजस्ता थियौँ हामी। त्यही नै हाम्रो संसार थियो। बिचरा हामी सिसाभित्र थुनिएर बाँचिरहँदा पनि समुद्रमा पुग्ने सपना देख्न छाड्दैन थियौँ।
आज सम्झन्छु, जीवनभर नसकिने कस्तो यात्रा हिँडिएछ, जो मर्दामर्दै पनि पूरा भएको देख्न पाइने छैन। त्यसबेला उनीहरू प्रशिक्षण दिँदा भन्थे, ‘हामीले त्यो दिन देख्न नपाए नि हाम्रो सन्तान-दरसन्तानका लागि हामी लड्नु पर्छ। हिजोका हाम्रा अग्रजहरूले लडिदिइएको भए आज हामीले यस्तो दिन देख्नु पर्दैनथ्यो। त्यसैले पनि क्रान्तिदेखि भाग्न खोज्नु कायर हुनु हो। क्रान्तिमा भाग लिँदै मर्नु भनेको वीरगति प्राप्त गर्नु हो। सहिद हुनु हो। न सहिद भएँ म, न त योद्धा भएँ। भएँ त मात्र अपाङ्ग। अपाङ्ग शरीर लिएर बाँच्न जति कठिन थियो, त्यसभन्दा कठिन रहेछ मनको अपाङ्गता। ‘ती पढेर जान्नेहरूले केही बुझेका हुँदैनन्, तपाईं परेर जान्नेहरूभन्दा। त्यसैले देश र जनताको मुक्तिका लागि बन्दुक बोक्नुपर्छ, पुरानो सत्ता ढालेर नयाँ सत्ता स्थापना गर्नुपर्छ। त्यहाँ तपाईंहरूजस्ता योद्धाको नाम इतिहासका पानामा सुनौला अक्षरले लेखिनेछन्। मरे सुनौला अक्षरले इतिहासमा नाम लेखिने, बाँचे सुनौलो जीवन जिउने संकल्प गर्दै क्रान्तिको बाटो रोज्न पुगेँ म पनि। पढाइलाई थाती राखेर कहिले पूर्व त कहिले पश्चिम पुग्थेँ म, पार्टीको जिम्मेवारी बोकेर। मेरो घर भने नि, कलेज भने नि त्यही पार्टी थियो। मेरो आफन्त भने नि, अभिभावक भने नि त्यही पार्टीका अग्रजहरू थिए। जे सिक्थेँ पार्टीबाटै सिक्थेँ।
२०५३ सालको कुरा हो यो, कुपण्डोलको एउटा पुरानो घरको भित्रपट्टकिो कोठा लिएर पार्टीको काम गर्न थालेकी थिएँ मैले। त्यहाँ पार्टीका अग्रजहरू मेरै कोठाको बाटो भएर आउँथे र जान्थेँ। त्यसमाथि पनि कामरेड चम्पा त झन् आइरहन्थिन्। दूधको पाकेट बोकेर। अचम्म लाग्थ्यो मलाई उनको लबाइ, खवाइ देखेर। काठमाडौँमा कुन लुगा निस्कन्छ, त्यही स्टायलको लुगा उनले लगाएको देख्थेँ म। तर, मेरो त जाडोमा लगाउने एउटा रातो कोट मात्र थियो। मैले बल्लबल्ल पैसा जम्मा गरेर किनेकी थिएँ, त्यो कोट। चर्को घाम लागेको दिन धोएर बेस्सरी निचोरी ओर्काइफर्काई सुकाउँथे म र सुकेपछि मात्र बाहिर निस्कन्थेँ।
८ मार्चको दिन थियो त्यो। कामरेड चम्पा बिहानै मेरो कोठामा आइन् र भनिन्, “कामरेड तपाईंसँग स्िवटर छ एउटा?” मैले हौसिएरै भनँे, “रातो कोट छ !” मजस्तो साधारण कार्यकर्ताको लुगा यति वरष्िठ नेताले माग्दा मेरो भुईंमा खुट्टा थिएन। लाग्यो त्यसैले त हामी कम्युनिस्ट ! भेदभाव, तलमाथि केहीको मतलब नगर्ने ! चिसो चिसो नै थियो काठमाडौँ तर मेरो शरीरलाई चिसो लागे नि मन त कहाँ चिसो थियो र ! यति ठूलो नेताले कोट जो मेरो लगाएकी थिइन्। गर्वले छाती ठूलो भएको थियो मेरो। म एउटा कुर्तामा हिँडिरहेकी थिएँ, थुरथुर काम्दै। “किन जाडोमा स्वेटर नलगाएको?” पछाडिबाट कामरेड नम्रताले सोधेकी थिइन्। “त्यति जाडो लागेकै छैन,” त्यसो भनिरहँदा शरीरभरि काँडा उमि्रएका थिए। घरीघरी मेरै छेउमा सानका साथ हिँडिरहेकी कमरेड चम्पालाई र उनले लगाएको मेरो रातो कोटलाई नियाल्दै बेपर्वाह दौडिरहेकी थिएँ जुलुसमा म। त्यसपछि कामरेड चम्पा र मेरो भेट लामो समयसम्म भएन। युद्ध मैदानमा कमान्डर बन्ने निर्देशन पाएपछि म पश्चिमतिर लागेँ।
पार्टीको निर्देशन शिरोपर गर्दै कैयौँपटक छिचोलेका छौँ अनकन्टार जंगललाई। चुनौती दिँदै हिँडेका छौँ निस्पट्ट रातलाई। जंगलका बाघ-भालु र बिच्छी-सर्पलाई। त्यसभन्दा पनि खतरनाक हाम्रा वर्ग शत्रुहरूलाई जसले सुइँकोसम्म पाए भने हाम्रो ‘सफाया गर्नेछन्। एकदिनको कुरा हो म र मेरो साथी रूपालाई एउटा सेल्टरबाट अर्को सेल्टर पुर्‍याउन कमरेड नीतेशले लैजादै थिए। हामी अनविज्ञ थियौँ त्यो ठाउँप्रति, निकै अघि बढिसकेपछि रातको अँध्यारोमा टाढा कतै बत्तीको मधुरो प्रकाश देखियो। हामीले बोकेजस्तै टर्चको उज्यालो हो वा जूनकीरी? छुट्याउन गाह्रो थियो। दुई सय मिटरजति अगाडि बढेपछि हामी सशंकित भयौँ, कतै सुरक्षाकर्मी हुन् कि भनेर ! हामी त्यहीँ रोकियौँ। घरी बल्दै त घरी निभ्दै गर्न थाल्यो त्यो बत्ती। हामीले पुनः आएकै बाटो र्फकनु युक्तिसंगत ठहर्‍यायौँ र टर्चको उज्यालो बन्द गरी हातको डोरी बनाएर छामछाम छुमछुम गर्दै लड्दै र ठोक्किँदै र्फकन थाल्यौँ। कामरेड नीतेशले पार्टीको माथिल्लो तहमा बुझ्न फोन सम्पर्क गर्न खोज्दा नेटवर्क समस्याले फोन लाग्ने स्थिति थिएन। जतापट्टी हामी फर्किएर जाँदै थियौँ, त्यतातिर पनि अघिकै जस्तो बत्ती देखियो। अब भने हामीलाई घेरा हालिसकिएको ठहर गर्‍यौँ हामीले। कामरेड नीतेशले मलिन अनुहार बनाउँदै विस्तारै भने हामीलाई, “कामरेडहरू हामीलाई सुरक्षाकर्मीले भेट्यो भने हामी उनीहरूको हातमा पर्नुभन्दा पहिले भरसक स्थिति हेरेर त्यहाँबाट फुत्कने प्रयत्न गर्नेछौँ। सकिएन भने आफूले आफैँलाई खत्तम गर्नेछौँ। यातनापूर्ण तरकिाले पटक-पटक मर्नुभन्दा एकैचोटि मर्न जाति हुन्छ।” हामीले दरो गरी तीनै जनाले एकअर्काको हात समात्यौँ। त्यसबेला भने मलाई उनीहरूको अनुहार हेर्ने रहर थियो तर टर्च बाल्नु खतरा भएकाले मेरो इच्छा पूरा हुन सकेन। छातीलाई बेस्सरी हानिरहेको थियो मुटुले। कति धेरै शक्ति हुँदो रहेछ, त्यति सानो मुटुमा, त्यो मैले पहिलोपल्ट अनुभव गररिहेकी थिएँ। केही नदेखिने त्यो निस्पट्ट रातमा आँखाले भने आमालाई देखिरहेको थियो। उनकै गर्भमा समय बिताएकाले हो वा उनले गर्ने निःस्वार्थ प्रेमले हो, अप्ठ्यारोमा परेका बेला मन र आँखा दुवैले आमालाई नै देख्ने गर्छु म। एकाएक कमरेड नीतेशको मोबाइलमा म्यासेज आयो। म्यासेजमा त्यहाँ खतरा छ, सुरक्षाकर्मीले घेरा हाल्ने सुइँको पाएको र अगाडि नबढी पछाडि र्फकन आग्रह गरएिको थियो। अब लगभग मृत्यु निश्चित थियो। संयोग नै भन्नुपर्छ, हाम्रो मनभन्दा अँध्यारएिर आयो आकाश र दर्कियो झरी। मुसलधारे झरीमा हाम्रै छेउबाट खासखास खुसाखुस गर्दै हतारँिदै सटासट अगाडि गए ती सुरक्षाकर्मीहरू। मैले आफैँले फेरेको सास आफैँले सुनेको त्यो पहिलोपटक थियो। मूर्दाजस्ता बनेका हाम्रा आँखाका नानी मात्र चलायमान थिए। अचम्म पानीले चुट्दा पनि मान्छेको जीउ लट्ठीले कुट्दासरह हुँदोरहेछ। त्यसमाथि पनि जंगली जुकाहरू जीउका विभिन्न भागबाट छिरेर चौपट्ट टोक्दै थियो। ठूला डरको अगाडि साना डरहरूले कसरी आत्महत्या गर्दा रहेछन्, त्यो मैले सुरक्षाकर्मी गइसकेपछि मात्र थाहा पाएँ। लगलगी काम्दै हामी उनीहरू गएको विपरीत दिशातिर छिटोछिटो बाटो छिचोल्न थाल्यौँ। करबि दुई घन्टा हिँडेपछि हामी एउटा सेल्टरमा पुग्यौँ। भोलिपल्ट कमरेड नीतेश त्यहाँबाट हिँडे। हामी भने एक साता बसेपछि त्यसको दुई घन्टाजतिको फरकमा पार्टीले शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको नेतृत्व मैले गर्नुपर्ने थियो। त्यो रात पटक्कै निद्रा परेन आँखामा। राती नै गोलीगठ्ठा झोलामा भिर्‍यौँ र एकअर्कालाई बधाई दियौँ। युद्धमा हिँड्दाखेरीका केही नियमहरू थिए, ती सबैले पालना गर्ने कसम खायौँ र दरो गरी हात मिलाउँदै निस्िकयौँ रातको अँध्यारोमै।
युद्ध, जहाँ मान्छे र बन्दुकको असाध्यै ठूलो भूमिका हुन्छ। मेरो पछि थुप्रै त्यस्ता लडाकूहरू थिए, जसले जीवन उत्सर्ग गर्न रत्तिभर हिचकिचाउने छैनन्। हामी निश्चित ठाउँमा पुग्यौँ र निश्चित समयमा सुरु गर्‍यौँ युद्ध। भिडन्त हुनथाल्यो कानैछेउबाट पनि गोलीहरू सुइँकेर जान्थे। हाम्रा बन्दुकबाट छुटेका गोलीले कति असर गर्दै थियो, त्यसको अन्दाज थिएन हामीलाई। त्यति नै बेला मेरो घाँटीको छेउको भाग र तिघ्रामा एकैचोटि गोली लाग्यो र म ढलेँ। साथीहरूले मलाई डोकोमा हालेको सपनाजस्तो लाग्दै थियो। त्यसपछि मैले आँखा चिम्लिएँ। पछि आँखा खोल्दा केही साथीहरू थिए मेरो साथमा। युद्धमा लड्दा-लड्दै लागेको गोलीले मेरो शरीरको आधा भाग नचल्ने भएको थियो। त्यतिखेर त लागेको थियो, मैले मेरो शरीरको अंग मात्र गुमाएँ। तर, होइन रहेछ। अहिले त मेरो घर नै संसार भएको छ। शक्तिविहीन भएपछि चाहिँदो रहेछ त घर र आफन्त नै। एउटा पार्टी घर र आफन्त कहाँ बन्न सक्दो रहेछ र?
आज लामो समयपछि कामरेड रूपा मलाई भेट्न आइन्, सुखदुःखका कुरा गर्‍यौँ हामीले। उनले नै खुलाइन् बितेको त्यो दिनको रहस्य पनि, मेरो रातो कोट कमरेड रूपाले लगाउनाको रहस्य। ८ मार्चको त्यो जुलुस सर्वहारा, शोषित, पीडित महिलाहरूको जुलुस भएकाले कमरेड चम्पासँग पुरानो रातो लुगा नभएपछि मसँग मेरो पुरानो त्यो कोट मागेकी रहिछन् उनले जुलुस र आफ्नो जीवनस्तर उस्तै देखाउन। छि ! मान्छे जस्तो देखिन्छ, त्यस्तो कहाँ हुँदो रहेछ र? पर्दा लगाइलगाई पो बाँच्दो रहेछ मान्छे त ! जति पर्दा लगाउन सक्यो राजनीतिमा उति माथि भर्‍याङ चढ्दो रहेछ मान्छे। कसैलाई भर्‍याङ चढाउन र कसैलाई भर्‍याङबाट ओराल्न आज पनि जुलुस हाम्रै घरको बाटो भएर गयो। म भने उही मेरो पुरानो रातो कोट सम्झेर टुलुटुलु हेररिहेकी छु ।
Posted in Nepali Stories	| Tagged अन्तिम युद्ध, क्रान्तिमा, जुलुसमा, भिडन्त, मुसलधारे झरीमा, रातो कोट, वीरगति, हामी कम्युनिस्ट	| Leaveareply
Max Thomas Scribbles
Nepal Kam Nepal – Sarubhakta February 21, 2020
Jadoo – Sarubhakta February 21, 2020
Rashtra Gaan – Sarubhakta February 21, 2020
Ek Din – Durga Lal Shrestha February 11, 2020
Putali Gaun – Durga Lal Shrestha February 11, 2020
Rastriya Geet – Durga Lal Shrestha February 11, 2020
Space – Manoj Bogati February 6, 2020
Khaderi – Manoj Bogati February 6, 2020
Saila Bahun – Manoj Bogati February 6, 2020
Ragat – Bikram Subba February 1, 2020
Dui Shahar – Bikram Subba February 1, 2020
Pilo – Bikram Subba February 1, 2020
Haat Haru – Bikram Subba February 1, 2020
The Last Smile – John Ruskin January 31, 2020
Night – John Ruskin January 31, 2020
John Ruskin January 31, 2020
The Pagans – Zachary Zuccaro January 25, 2020
The Junkie – Zachary Zuccaro January 25, 2020
Hydrangea – Zachary Zuccaro January 25, 2020
Wisdom And Knowledge – Zachary Zuccaro January 25, 2020
Oscar Wilde January 16, 2020
Mist – Henry David Thoreau January 16, 2020
The Moon – Henry David Thoreau January 16, 2020
Friendship – Henry David Thoreau January 16, 2020
Smoke – Henry David Thoreau January 16, 2020
Henry David Thoreau January 16, 2020
Collection of Poems (323)
Nepali Poems (196)
Musings on Philosophies and Peanuts